Iingelosi kukhe kuthethwe ngazo ezincwadini, zibe kwimifanekiso nakwiimuvi. Kodwa ngoobani iingelosi, ibe uyintoni umsebenzi wazo?
Ngaphambi kokuba uThixo adale izinto ezibonakalayo nabantu bokuqala, wayesele enze izidalwa eziphakamileyo nezikrelekrele. Zinamandla ngaphezu kwabantu, ibe zihlala kwindawo ahlala kuyo uThixo, engafikelelekiyo nengabonwayo ngabantu. (Yobhi 38:4, 7) IBhayibhile izibiza ezi zidalwa ngokuthi ‘ngoomoya okanye iingelosi.’—INdumiso 104:4. *
Zingaphi iingelosi? Linani elikhulu kakhulu. Iingelosi ezijikeleze itrone kaThixo ‘zingamashumi amawaka aphindwe ngamashumi amawaka.’ (ISityhilelo 5:11) Ngamany’ amazwi, sinokuthi iingelosi zingamakhulu ezigidi!
‘Ndabona iingelosi ezininzi ezijikeleze itrone. Inani lazo lalingamashumi amawaka aphindwe ngamashumi amawaka namawaka amawaka.’—ISityhilelo 5:11.
Zazisenza ntoni iingelosi kudala?
Iingelosi zazisiba zizithethi zikaThixo okanye abathunywa. * Zikwaboniswa eBhayibhileni ziphumeza imisebenzi kaThixo emangalisayo. UThixo wathumela ingelosi ukuba isikelele uAbraham, imnqande nasekunikeleni ngonyana wakhe uIsake. (Genesis 22:11-18) UMoses wabona ingelosi iphakathi kwetyholo elivuthayo, imphathele umyalezo owawuza kutshintsha ubomi. (Eksodus 3:1, 2) Xa umprofeti uDaniyeli waphoswa emngxunyeni weengonyama, ‘uThixo wathumela ingelosi yakhe, yayivala imilomo yeengonyama.’—Daniyeli 6:22.
“Kwabonakala ingelosi kaYehova kuye [uMoses] isedangatyeni lomlilo etyholweni elinameva.”—Eksodus 3:2.
Zenza ntoni iingelosi ngoku?
Asinakuyazi yonke into eyenziwa ziingelosi namhlanje. Sekunjalo, iBhayibhile ibonisa ukuba nazo zinceda abantu abanyanisekileyo bazi okungakumbi ngoThixo.—IZenzo 8:26-35; 10:1-22; ISityhilelo 14:6, 7.
UYehova wanika usolusapho uYakobi iphupha elibonisa iingelosi zisenyuka zisehla ‘kwileli’ ephakathi kwezulu nomhlaba. (Genesis 28:10-12) Elo phupha inoba labangela ukuba uYakobi aqonde oko sikuqondayo nathi namhlanje, ukuba uYehova uThixo uthumela iingelosi zize emhlabeni ukuze zincede abantu abanyanisekileyo abadinga uncedo.—Genesis 24:40; Eksodus 14:19; INdumiso 34:7.
‘Wabona ileli imiswe emhlabeni, umphezulu wayo ufikelela emazulwini; yaye iingelosi zikaThixo zazinyuka zisihla kuyo.”—Genesis 28:12.
^ isiqe. 6 IBhayibhile ibonisa ukuba abanye boomoya bavukela ulawulo lukaThixo, ibe ezi ngelosi zingendawo izibiza ngokuba ‘ziidemon.’—Luka 10:17-20.
^ isiqe. 11 Igama lesiHebhere nelesiGrike elisetyenziswe eBhayibhileni elithi “ingelosi,” lithetha “umthunywa.”